The Legend of Shangri-La: Cluster Pays | Slots Deposit Bonus | slot စာမျက်နှာများ
The various symbols on the reels include butterflies, flowers, dragonflies, koi carp, and three guru symbols i.e. elephant, cat, and monkey. The highest-valued symbol of the slot is the cat that can pay you up to 1000 times the stake when you get thirty or more of them on the reels. The guru symbols help the players by appearing in the stacked form on the reels. အများအားဖြင့်, the players win when they are able to formacluster of nine or more of the symbols.
Free Spin feature gets triggered when you land up with three or more free spins symbols on the reel giving you up to 8 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ. If you land up with only2free spin symbols, the Nudge reels feature is activated where you get the third illusive free spin symbol nudged on the reels to activate the free spins feature.
100% အထိအပိုဆုမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် £ / € / $ 200
50X Wagering the deposit bonus amount before withdrawal. Bonus offer valid for 30 ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းထံမှနေ့ရက်များ. Max conversion for deposit:5times the bonus amount. Subject to site and SlotPages.com's full အပိုဆုပေါ်လစီ .
နေအိမ် – slot စာမျက်နှာများ!
အွန်လိုင်း slot ကာစီနိုရီးရဲလ်ငွေ | slot စာမျက်နှာများ | Jewel Strike Play + အများကြီးပို
ဖုန်းဘီလ်ခြင်းဖြင့်အွန်လိုင်း slot Deposit | slot စာမျက်နှာများ | အခမဲ့သည် Arcade Play
အွန်လိုင်း slot အားကစားပြိုင်ပွဲ | slot စာမျက်နှာများ | ဟူသည်မှာအခမဲ့သည် Fly တဲ့အခါမှာ Play
အွန်လိုင်း slot ကနေဒါရီးရဲလ်ငွေ | slot စာမျက်နှာများ | အခမဲ့များအတွက်ဂျိမ်းစ်ဒင်း Play
Starburst အပေါ်အခမဲ့ဗိုင်းငင် | slot စာမျက်နှာများ | £200 Deposit Bonus Slots
အွန်လိုင်း slot အခမဲ့ | slot စာမျက်နှာများ | အခမဲ့များအတွက် Taco ညီအစ်ကိုများ Play
ရီးရဲလ်ငွေများအတွက်အွန်လိုင်း slot | slot စာမျက်နှာများ | အခမဲ့သည်ပန်းရောင်များအတွက်ပြိုင်ပွဲ Play
အွန်လိုင်း slot ဗြိတိန်အခမဲ့ Credit | slot စာမျက်နှာများ | Taco ညီအစ်ကိုများ Play
အွန်လိုင်းကာစီနို slot အခမဲ့ | slot စာမျက်နှာများ | အခမဲ့များအတွက် Blackjack နျ Standard Play
အွန်လိုင်း slot အခမဲ့အပိုဆု | slot စာမျက်နှာများ | အခမဲ့များအတွက် Wildcat Canyon အ Play
အွန်လိုင်းကာစီနို slot | slot စာမျက်နှာများ | Blackjack နျ Standard Play
မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းဗီဒီယို slot | slot စာမျက်နှာများ | အခမဲ့များအတွက် Sparta ၏ကံကောင်းထောက်မစွာ Play
မူပိုင်ခွင့်© 2018, slot စာမျက်နှာများ All rights reserved.